Hojiileen eegumsa biyyoofi bishaanii eegalamuuf jedhame
Lafa heektaara mili­yoona 3 caalu irratti hojiin misooma sulu­laafi eegumsa biyyoofi bishaanii hojjetamuuf humna raawwachiis­tummaa cimsuun haal-dureen xumuramuu ib­same
Hojiilee eegumsa biyyoofi bishaanii bara 2004 keessaa hoj­jetamaniifi muuxaan­noowwan gaggaarii galmaa'an bu'uura god­hachuun bara kanas hojii caalmaan hoj­jetamuu akka qabu kallattiiwwan raaw­wii darbaniiru. Kallattiiwwan kun kan darban tibbana magaalaa Adaamaatti hojiilee wayita Bonaa hojjetamuu qa­ban ilaalchisuun waltajjii leenjii fi kallatti kennuu gaggeessitootaa olaanaa fi giddu-galeessaa waliin taa'ame irratti.
Waltajjii leenjii kanaan, hanqinoon­ni bara darbe hojii misooma sululaa, eegumsa biyyoofi bishaanii keessatti mul'atan qoratamuun hojii bara kanaatti gufuu akka hin taane kallattiin furmaataa itti kennameera.
Kallattiiwwan kaa'aman kana hor­dofuun hojiin eegumsa qabeenya uu­mamaa bara kana hojjetamuuf karo­orfame, dhimmoota hojiilee fizikaalaa fi baayolojii kan waliin deeman hunda qindeessuun akka raawwatu hogganaan Biiroo qannaa Oromiyaa Ob. Zalaalam Jamaanee ibsaniiru.
Bu'uuruma kanaan, hojiilee misooma sululaa waliin, hojiileen misooma beey­ladaafi misooma bunaa xiyyeeffannaan itti kennamee kan raawwatamudha akka ibsa Ob. Zalaalamitti.
Misooma magariisaa biyyi keenya jalqabde milkeessuun kan danda'amu, humna ummataatiin yeroo gabaabaa keessatti hojii qabeenya uumamaa hojj­echuun waan ta'eef, karoorri dhimma kanaaf karoorfamu hundi hanga qon­naan bulaa dhuunfaatti bal'atee bahuu qabas jedhameera.
Haaluma kanaan jedhan Ob. Za­laalam, karoorri eegumsa qabeenya uumamaa bara kanaa hanqinootaafi ciminoota bara darbee adda baasuu, ak­kasumas, kallattiiwwan raawwii KGT, TMGB," Bishaaniifi qabeenya uuma­maa qabnu gahumsaan fayyadamuu" jedhu bu'uura godhatee kan qophaa'u ta'uutu ibsame. Kanaafuu, karoora kana galmaan gahuuf akka danda'amutti yaaduufi duudhaalee jaallee Mallas waliin sosochii hawaasaa uumame akka carraa guddaatti dhimma itti bahuun murteessaa akka ta'es Ob. Zalaalam dhaamaniiru.
Leenjii fi kallattiin kennamu kunis hanga sadarkaa gandaatti itti fufuun bo­qonnaa qophii keessatti hojiin dandeet­tii raawwachiistummaa cimsuu akka raawwatu waltajjii kanarraa hubachuun danda'ameera